Posted By: Admi1waa: Abriil 4, 2020 00: 45 No Comments
Waxa kaliya ee aan ka nidhaahno Mareykanka waa mid la waafajinayo waxaad ku qortay warqad: Maalmo adag ayaa soo socda. Sida dadka oo dhami, waxaan jeclaan lahaa inaan ku noolaado nolol dheer maxaa yeelay cimri dheere waa muhiim, laakiin taasi aniga maanta dan kama gelin. »
Martin Luther-King, ma ogaa waxa ku dhici doona isaga? Si kasta ha noqotee, ereyada hadalka maalin ka hor dilkiisa, waxay la jaan qaadayaan qoraalkan. « Si loo sameeyo cadawga, looma baahna in lagu dhawaaqo dagaal, kaliya dheh sida aad u malaynayso! »
Maahmaah & Eray: Waxaa qoray, Martin Luther-King
DRC: geerida Dhakhtar Muyembe “Magaca awoowayaasha Kongo iyo dhamaan dadka Madowga / Afrikaanka ah, waxaa ku dhinta Doctor Muyembe iyo farcankiisii ​​oo dhan; ma aha maalintii uu dhashay ... (VIDEO)
Kumaa caddaanku weydiistaan ​​cafis? Talyaaniga, Kaniisadda Katooliga, Mareykanka, Ingiriiska, Ingiriiska, Biljimka, Shiinaha, Faransiiska iyo dalal kale oo Yurub ah waa inay cafis weydiistaan ​​Afrika, taasi waxaa loola jeedaa dadka madowga ah. / Afrikanka dhamaan wixii waxyeelo ah oo ay ku kaceen si cadhada ilaahay uu u dejiyo… (VIDEO)
Oct01 08: 56